Adrafinil ntụ ntụ (63547-13-7) hplc ma98% | AASraw Nootropics ntụ ntụ
Adrafinil ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Adrafinil ntụ ntụ
SKU: 63547-13-7. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nhazi nke Adrafinil uzuzu (63547-13-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Adrafinil ntụ ntụ nke French French pharmaceutical ụlọ ọrụ, Lafon, na-emepụta ọgwụgwọ maka ịgwọ narcolepsy.Known dị ka ọgwụ, Adrafinil na-edozi ahụ ma gbanwee ya na mberede, Modafinil.Adrafinil na-eji ndị narcolepsy, nsogbu ụra ndị ọzọ ma ọ bụ oke ike gwụrụ ụbọchị. Ndị ọzọ na-erite uru site na ọgwụ a bụ ndị na-arụ ọrụ nrugharị abalị, yana ndị ọrụ ha chọrọ ka ha mụrụ anya maka ogologo oge na-enweghị ụra.
Adrafinil ntụ ntụ video
Adrafinil uzuzu isi ihe
aha: Adrafinil ntụ ntụ
Molekụla Formula: C15H15NO3S
Ọbara arọ: 289.35
Adrafinil uzuzu na-eme ka ụbụrụ dịkwuo mma ma na-agbakwunye okirikiri
Raw Adrafinil ntụ ntụ Usage
Adrafinil uzuzu enwewo mmuta na afo ndi a gara aga dika ozo ya na modafinil na ndi ozo.
A na-emeso adrafinil ntụ ntụ dị ka ihe mgbakwunye nri na United States na ị nwere ike ịzụta ya n'ejighị ọgwụ.
N'ihe banyere usoro iheomume, Adrafinil raw ntụ ntụ dị ka modafinil na mgbakwunye nke OH (nke hydroxyl) na nitrogen, na-eme hydroxylamine.
Adrafinil raw ntụ ntụ bụ prodrug maka modafinil. Nke a pụtara na ọ gbanwere modafinil na ahụ, nke bụ ọrụ na-arụ ọrụ ndụ. Naanị akụkụ nke Adrafinil ntụ ntụ ka a gbanwere ka modafinil, ebe ndị fọdụrụ nọ na-etinye aka na acid modafinilic anaghị arụ ọrụ.
Adrafinil uzuzu na-amụba ụbụrụ na-enweghị ọtụtụ mmetụta ndị na-adịghị mma na-esonyere ọgwụ ndị ọzọ na-akpali akpali. Ọ na-eme ka ike gwụrụ mgbe ị na-eburu onye ọrụ ahụ anya.
N'agbanyegh i uru o bara uru, adrafinil uzuzu bu ihe na-adighi nma na ndi na-abaghi ​​uru. Nnyocha achọpụtawo na ọ gaghị eme ka ọ bụrụ nsí na ọbụna na doses karịrị nnọọ ihe a na-atụ aro ya.
Ọdịdị dị mma nke Adrafinil ntụ ntụ dị n'etiti 600-1200mg. Adrafinil uzuzu bu mmiri nwere ike ichota ma nwee ike iwere mmiri ma o bu ihe ozo na afo efu. Ekwesiri iburu ya n'ụtụtụ ebe ọ bụ na ị na-ewere nke a n'ehihie ma ọ bụ na mgbede nwere ike ime ka ehighị ụra. Ndị ọrịa kwesịrị ịra Adrafinil raw ntụ ntụ na ọnụọgụ dị ala iji malite ya, wee nwee ike jiri nwayọọ nwayọọ bulie elu dị elu.
Adrafinil uzuzu kwesiri iwere ya na mgbe ufodu. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịme ụbọchị ọ bụla a ga-ezute oge ndị siri ike ma ọ bụ mgbe ọrụ choro ka oge ị ga-arụkwu ọrụ. A pụkwara ịṅụ ọgwụ na usoro cyclic. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ịṅụ ọgwụ a maka izu abụọ wee wepu ezumike maka otu izu. N'ụzọ dị otú a, a pụrụ ibelata mmetụta ọjọọ nke ọgwụ na imeju.
Ịdọ aka ná ntị na Adrafinil uzuzu
A na-ekwu na Adrafinil ntụ ntụ nwere ike ịbụ hepatotoxic (emerụ umeji). Echiche bụ na ebe ọ bụ na ntọghata Adrafinil raw ntụ ntụ ka modafinil chọrọ ume enzymes, na Adrafinil ntụ ntụ na-egbochi imeju.
Ọ na-anọgide na-amaghị ihe CYP450 isoform (imeju enzyme) na-atọghata Adrafinil raw ntụ ntụ ka modafinilic acid na modafinil. Ma enweghi ihe akaebe siri ike na Adrafinil ntụ ntụ na-egbochi imeju.
A na-ewere iji ntụ ọka Adrafinil mee ihe nchebe n'oge dị mkpirikpi. Na oge dị mkpirikpi, a na-ewere ọgwụ ahụ dịka onye na-akwalite mgbasa ozi. Ọ na-akpali ikike nghọta na nghọta na ụmụ mmadụ. Nnyocha na-egosi na iji ọgwụ a eme ihe pụkwara imetụta ọnọdụ nke ndị mmadụ.
A naghị atụ aro Adrafinil raw ntụ ntụ maka ogologo oge. Kama nke ahụ, a pụrụ ịṅụ ọgwụ na cycles. Ọ bụrụ na ọ bụ maka ogologo oge, ahụ nwere ike ịzụlite ndidi megide ọgwụ ahụ, ọ gaghị emetụta mmetụta ya. N'iji ogologo oge mee ihe, ọ nwere ike ịme ndị mmadụ ka ha gbanwee àgwà ha, dị ka ndị nwere anụ ọhịa nwere ike ịghọkwu okwu. Adrafinil ntụ ntụ na-eji ya eme ihe n'ụzọ dị irè maka ọgwụgwọ ọrịa Alzheimer na France
Banyere usoro adrafinil nke nhazi nke ọrụ, Adrafinil ntụ ntụ na-arụ ọrụ na adrenergic system, akụkụ nke usoro ụjọ ahụ nke na-ahapụ adrenaline. A na - ejikọta ya na nzaghachi "ọgụ ma ọ bụ ụgbọ elu", ịhapụ adrenaline ngwa ngwa na - eme ka ume dịkwuo elu ma na - eme ka nchekwube. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe niile Adrafinil raw powder na-eme kpamkpam ghọtara, ọ na-kweere na-emegharịghachi mmetụta dị mma nke ntọala adrenaline site na-ewuli adrenergic neurotransmitters.
N'uzu, Adrafinil ntụ ntụ bụ prodrug ma ọ bụ precursor, nke pụtara na ọ bụ na mbụ ka ọ na-arụ ọrụ ọgwụ na-adịghị arụ ọrụ ma na-agbanwe ya n'ime ụdị ahụ. Adrafinil raw ntụ ntụ na-emeju na imeju, ebe a na-atụgharị ya na Modafinil, ọgwụgwọ USFDA maka ọgwụgwọ maka ịda anya nke e rere n'okpuru aha aha Alertec, Modavigil, na Provigil. Ihe ntanetị nke ọgwụ Adrafinil dị ka ndị Modafinil.
Ọ bụ ezie na usoro kemịkal kpọmkwem nke Adrafinil raw powder adịghị kpamkpam, ndị na-eme nchọpụta na-ekwu na ọ bụrụ na ọ na-eme ihe dị ka onye na-anụ ọkụ n'obi na-anabata ọrịa. Otu n'ime ihe ndị bụ isi ya na-eche na ọ bụ mmepụtawanye na mmepụta nke hypocretin neurotransmitter, nke n'aka nke ya nwere ike ịkpalite mmepụta nke dopamine, histamine, na norepinephrine. Ndị a nile na ndị hormones ndị a na - emetụtakarị nkwụsị na ike, nke na - akọwa Adrafinil raw powder's stimulant properties.
A na-ekwenye na mmetụ nke Adrafinil na-emewanyewanye ma na-enwe mmetụta uche na-eme ka ọ bụrụ ọtụtụ omume, gụnyere mgbanwe dị mma nke ndị na-anabata glutamate na-egbochi nkwụsị nke glutamate. Nke a nwere ike ime ka mkparịta ụka na-adịwanye mma, nke na-eme ka ncheta dị mma ma lekwasị anya ma mepụta arụmọrụ nke ọma n'ozuzu.
A na-ekwenye na adrafinil raw ntụ ntụ na-akpali ntọhapụ nke serotonin, nke na-eme ka obi dịkwuo elu site n'inyere aka belata nchekasị. O nwekwara ike imebi nkwụsị nke dopamine, onye na-ahụ maka nrụrụ na-arụ ọrụ buru ibu na ụgwọ ọrụ na ntụrụndụ nakwa dị ka mmetụ mmetụta uche.
Ngwá Ike Adrafinil
Raw Adrafinil ntụ ntụ Marketing
IV. Esi zụta Adrafinil ntụ ntụ si AASraw?
Ngwá Ike Drug Adrafinil Powder: Gịnị Ka Ị Ga-achọ Anya?
1 nyochaa maka Adrafinil ntụ ntụ
Adrafinil ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi